हाम्रो जितले प्रदेशको राजधानी दाङ सुनिश्चित हुन्छ- शंकर पोख्रेल – Janaubhar
हाम्रो जितले प्रदेशको राजधानी दाङ सुनिश्चित हुन्छ- शंकर पोख्रेल
प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर १८, २०७४ | 199 Views ||
प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार दाङ क्षेत्र नं. २ (१)
निर्वाचन प्रचार अभियान कसरी चलिरहेको छ ?
यहिबेला हामी जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा प्रचार गरिरहेका छौं । त्यहाँ जनताको अत्यन्त उत्साह देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जुन उत्साह देखिएको छ, त्यसले अहिलेको वामपन्थी गठबन्धनप्रति जनता आकर्षित भएको देखिन्छ ।
निर्वाचनमा तपाई जनतासँग के एजेण्डा लिएर जानुभएको छ ?
विकास र समृद्धिको कुरालाई मुख्य एजेण्डा बनाएर आएका छौं । विगतमा नेपालमा राजनीतिक प्रश्नमा देश केन्द्रित भयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको डिस्कोर्स चेञ्ज भयो । दुई ठूला दल वाम पार्टी मिलेर राष्ट्र निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकास र समाजवादमा जाने दिशालाई नै हामीले मुख्य एजेण्डा बनाएका छौं । दाङको समृद्धिलाई हामीलाई ५ नं. प्रदेशको समृद्धिसँग जोडेका छौं । दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरालाई जनतासँग हामीले जोड दिएका छौं ।
आम मतदाताले अन्य उम्मेदवारलाई मतदान नगरेर तपाईलाई नै मतदात गर्नुपर्ने कारण के छ ?
पहिलो कुरा हामी मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, अविकास, असमानता र विभेदबाट मुक्त हुन खोजेका छौं । त्यसका लागि हामी आमुल परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौं । जनता पनि आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन चाहन्छन् । हामीसँग त्यो भिजन भएकाले जनताले साथ दिनुपर्छ भन्ने हो ।
अर्को कुरा, दाङले मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि प्रदेशको राजधानी बन्ने कुरा अझ सुनिश्चित हुन्छ । जनता विकास माग्नेलाई भन्दा विकास दिन सक्ने तहमा पुग्नेलाई विजयी गराउन चाहन्छन् । अर्को कुरा, दाङलाई ५ नं प्रदेशको राजधानी बनाउन वाम गठबन्धनको विजय हुन जरुरी छ । हाम्रो जितले दाङ राजधानी हुने कुरा सुनिश्चित गर्छ ।
दाङलाई ५ नं प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरा गर्नुभयो । दाङ नै यो प्रदेशको राजधानी बन्ने आधार के छ ?
दाङ राजधानीका लागि सबैभन्दा उपर्युक्त जिल्ला हो । यो ५ नं प्रदेशको बीच भागमा पर्छ । अर्को कुरा राजधानी हुनका लागि सुरक्षित स्थान पनि चाहिन्छ । भौगोलिक रुपमा काठमाडौं उपत्यका जत्तिकै सुरक्षित छ दाङ उपत्यका । चारैतर्फ पहाडले घेरिएको छ । यहाँ प्रशस्त खाली जमिन छ । वातावरणीय हिसाबले दाङमा शीतलहर पनि लाग्दैन, लु पनि लाग्दैन । यहाँ धेरै चिसो पनि हुँदैन धेरै गर्मी पनि हुँदैन । यी थुप्रै कारणले दाङ यो प्रदेशको राजधानी बन्न उपर्युक्त छ ।
हामीले दाङलाई राजधानी बनाउने मिसनमा लागेका छौं । हामी यसमा सबै पक्षलाई सहमति गराएर अघि बढ्न तयार छौं । दाङ भू–राजनीतिक संवेदनशीलताका हिसाबले पनि उपयुक्त ठाउँमा छ । हावापानीका हिसाबले पनि अत्यन्त अनुकूल छ । यहाँ बस्ती विकासका लागि उपयुक्त ठाउँ पनि हो । पूर्वाधार विकासका हिसाबले पनि दाङ उपत्यका अहिले नै अकुपाई भइसकेको छैन । जहाँ योजनाबद्ध पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न सक्छौं । त्यस अर्थमा प्रदेशको राजधानीका लागि दाङ उपयुक्त छ भन्ने कुरा कुनै विवाद छैन ।
तपाई प्रदेश सभा सदस्य भइसकेपछि यस क्षेत्रका जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
जनतासँग असीमित अपेक्षाहरु छन् । हामी पहिलो चरणमा आधारभूत अपेक्षाहरु पूरा गर्ने छौं । अबको पाँच वर्षभित्रमा हामीले प्रदेशको आधार तयार गर्छौं । रोजगारीका अवसरहरुलाई सुनिश्चित गर्छौं । हामी प्रदेशका युवाहरु विदेशिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छांै । जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि कृषि, पशुपंक्षी पालनको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्न रुपरेखा तयार गरेर जनताको आर्थिकस्तरलाई माथि उठाउने काम हामीले गर्नेछौं । त्यो कुरा जनताले प्रत्यक्षरुपमा अनुभूत गर्न पाउनेछन् ।
तपाईहरु अहिले दुई ठूला वामपन्थी दलहरुबीच मिलेर चुनवामा जानुभएको छ । पार्टी एकतासम्म पुग्ने भनेर तपाईहरुका शीर्ष नेताहरुले भनिरहनुभएको छ । यो गठबन्धन कुन तहसम्म कायम हुने देख्नुहुन्छ तपाई ?
यो गठबन्धन पार्टी एकतासम्म पुग्छ । हामी निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकताका लागि पहल थाल्छौं । वाम गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता पनि हो । बाम गठबन्धनका बिषयमा नेता कार्यकर्ता जति उत्साहित छन् त्यो भन्दा ज्यादा जनता उत्साहित छन् । त्यस अर्थमा जनताले पार्र्टीहरु बीचको एकता चाहेका रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ ।
अर्कोतर्र्फ अधिकार प्राप्तिको लडाइमा जति धेरै पार्टीहरु भए पनि, नेताहरु भए पनि खासै फरक पर्दैनथ्यो । किनकि राज्यलाई कमजोर पार्नका लागि जताबाट प्रहार गरे पनि हुन्थ्यो । अधिकार प्राप्तिको लडाइ संस्थागत भइसकेपछि समृद्धिको लडाईको सन्दर्भको कुरा गर्दा धेरै पार्टी उपयुक्त होइन । त्यसले राजनीतिक अस्थिरता जन्माउँछ । नेपालको राजनीतिको सबभन्दा ठूलो रोग भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । नौ÷नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने जुन चक्र छ त्यो चक्रलाई तोड्न जरुरी छ । त्यसका लागि पनि हामीले अब वामपन्थी गठबन्धनको जीतको आवश्यकता देखेका छौं । जनताले राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको वाम गठबन्धनबाट सम्भव देखेका छन् ।
अर्कोतर्फ आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने बित्तिकै कस्तो प्रकारको आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, कुन बाटोबाट समाजलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । हामी उत्पादन सम्बन्धका हिसाबले श्रमजीवी वर्गलाई बलियो बनाउने गरी अगाडि बढ्न चाहन्छौं । उत्पादक शक्तिको विकास गर्न चाहन्छौं । राष्ट्रिय पूजीको विकासका माध्यमबाट श्रमजीवी वर्गलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं । उत्पादन शक्तिको विकास गर्न चाहन्छौं र राष्ट्रिय पूँजीको विकासका माध्यमबाट समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौं । त्यस अर्थमा गठबन्धन प्राकृतिक छ र यो राष्ट्रको समृद्धिको प्रश्नमा एक ठाउँमा उभिएका छौं ।
अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस उदारवादको पक्षमा छ । उसले व्यापारिक पूँजीवादको पक्षपोषण गर्छ । व्यापारिक पूँजीवाद भनेको दलाल, नोकरशाही पूँजीवादको जन्मदाता पनि हो । त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा आफूलाई खडा गर्न सक्दैन । वामपन्थीहरु राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षका हिमायतीका रुपमा देखिएका छन । उनीहरु जनता सबल हुने कुरालाई राष्ट्र पनि सबल हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई विश्वास पनि छ ।
तपाईहरुको गठबन्धनलाई नेपाली कांग्रेसले अधिनायकवाद उन्मुख भनेको छ नि ?
त्यो काग्रेसहरुले लगाएको आरोप मात्र हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सन्दर्भमा कुरा गर्दा बरु आफूलाई लोकतन्त्रको च्याम्पियन ठान्ने नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वहरु आन्दोलनबाट पलायन भएका दृष्टान्तहरु धेरै छन् । २०१७ सालको घटनापछि नेपाली कांग्रेस नै पञ्चायत प्रवेश गरेका थिए । यो सत्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ जतिबेला शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यतिबेला नेपालको लोकतन्त्र संकटमा प¥यो । त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा अफवाहसिद्ध भइसकेको छ ।
मूलतः नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भेनगार्डको रुपमा नेपालका वामपन्थीहरु लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कुरामा पनि सफल छन् भन्ने कुरा विगतले नै पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसमाथि नेपालका कम्युनिष्टहरु लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट उनीहरु समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छन् । त्यस अर्थमा अधिनायकवादको आरोप लगाउने कुरा पूर्णरुपले गलत हो ।
र, अन्त्यमा आम मतदातालाई केही भन्नु छ कि ?
दङाली मतदाताहरुका बीचमा सदैव अति राजनीतिकरणको कोसिस भयो । अर्कोतर्फ जातीयताका आधारमा मतदाताहरुलाई प्रभावित गर्ने कोसिस पनि विगतमा भयो । जसले गर्दा आफ्नो ठाउँमा भविष्यका सन्दर्भमा भूमिका खेल्नसक्ने नेतृत्वलाई स्थापित गर्न सकिएन । त्यो चिज अहिले दाङबासीहरुलाई व्यापकरुपमा महसुस भएको मैले पाएको छु । त्यसलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ ।
कार्यकर्ताहरु आफ्नो राजनीतिक भविष्यका सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरा स्वाभाविक रह्यो, तर जनताको हकमा भन्ने हो भने आफ्नो जिल्लामा हित कसरी हुनसक्छ, मुलुकको हित कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराका आधारमा लचिलो भएर निस्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ ।
यसपटक जनताको भावनाअनुसार एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ चुनावी तालमेलद्वारा अगाडि आएका छौं । वामपन्थी दलहरुलाई साथ दिनका लागि म सम्पूर्ण दङाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु । र, यसपटक हामीले तीनै तहमा वामपन्थीको सरकारको कुरा गरेका छौं । यो वामपन्थीहरुलाई काम गर्नका लागि एउटा मौका हो । अहिलेसम्म उनीहरुले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसपटक बहुमतसहितको सरकार बनाउन दिएर वामपन्थीहरुले साँच्चै देशका लागि केही गर्न सक्छन् भन्ने जुन भावना छ, त्यसलाई प्रयोग र परीक्षणमा लैजानका लागि अवसर प्रदान गर्न म सम्पूर्ण दङाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
वाम गठबन्धनको तर्फबाट मैले प्रदेशको र कृष्णबहादुर महराजीले देशको नेतृत्व गर्दा सिंगो दाङले देश र प्रदेशको नेतृत्व लिने अवसर आएको छ । यसका लागि दाङका नौ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा वामपन्थी उम्मेरुदवारहरुलाई विजय गराउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
Prevयसरी सुनिश्चित हुँदैछ इन्द्रजितको जित
Nextदुई पार्टीको एकता भइसक्यो, अब कमिटीमा एक गर्न मात्र बाँकी छ- जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’